Ukulungisa izinwele, i-hairspray noma i-gel? | Amadoda aSitayela
Uma enekhwalithi, ama-gummies nama-lacquers asivumela ukuthi sigcine izinwele zethu zisendaweni ngisho nangezinsuku ezinde kakhulu zokusebenza. Ngaphezu kwalokho, ezikhathini zamuva le mikhiqizo ye- izinwele Bafaka izithako kwifomula yabo yokondla nokuqinisa izinwele, ngamafuphi, ukuzenza zibe nempilo.
AmaGummies nama-lacquers abelana ngenhloso efanayo: ukusisiza sichaze futhi lungisa izinwele. Kodwa-ke, umphumela awufani, futhi kule ncwajana sikunikeza isandla ukuze wazi ukuthi ungayisebenzisa nini ngayinye.
1 Lungisa izinwele nge-hairspray
2 Lungisa izinwele nge-gel
Lungisa izinwele nge-hairspray
La lacquer ivumela ukunyakaza okuthile, kuye ngamandla ayo. Abakhiqizi bavamise ukuyenza ngamazinga ahlukene wokulungiswa. Ngaphezu kwalokho, uthola nokubanjwa okungokwemvelo futhi iningi lisuswa kalula ngokuxubha.
Sebenzisa i-hairspray ukuthola izitayela zezinwele ngevolumu nokunyakaza. Uma izinwele zakho zinde zide kakhulu, i-hairspray ingumkhiqizo okufanele uwusebenzise ezinweleni zakho ukusetha isitayela sakho sezinwele.
Lungisa izinwele nge-gel
La gumdrop I-fixative enamandla kunazo zonke ekhona. Ngaphezu kokunikeza incazelo ephelele - kusivumela ukuthi senze cishe noma yini esingayicabanga ngamalokhi ethu - ibuye ibonakale ngokungeza ukukhanya okwengeziwe ezinweleni.
Sebenzisa ushungamu ukuthola izitayela zezinwele ezimakwe kahle nobufakazi bebhomu. Uma ubude bezinwele zakho bufushane noma bumaphakathi, ijeli ngumkhiqizo okufanele uwusebenzise ezinweleni ukulungisa izinwele zakho. Khumbula ukuthi kungumlingani ophelele wohlukaniso ohlangothini, ukubukeka kwezinwele ezimfushane kakhulu phakathi kwamadoda.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Lungisa izinwele nge-hairspray noma i-gel?